Blue Light Filter For Windows - 💡💻 Iris - Software sokuvikelwa Eye, Impilo kanye Ukukhiqiza 🛌👀
Iris nokuvungula ngoba Wayland
Thenga nge PayPal
Thenga nge-Debit / Credit Card
Thenga nge Bitcoin
This glare and flickering causes headaches, iso umthwalo, mental fatigue, physical fatigue, and other conditions.
When we have prolonged exposure to Blue Light you may get loss of vision, ukonakala macular, retinal damage, and other eye problems.
Posted in Izihloko
contact@iristech.co · Imibandela · adalwe Daniel Georgiev.
Sisebenzisa amakhukhi sikunikeze kangcono isipiliyoni, ukwenza okuqukethwe kanye nokubhekisisa traffic. Funda mayelana nendlela esisebenzisa ngayo amakhukhi nokuthi ungalawula ngokuchofoza "Inqubomgomo Izintandokazi". Uma uqhubeka ukusebenzisa le sayithi, uvumela ekusebenziseni kwethu kwamakhukhi.
Inqubomgomo oluthandwayo Centre
Uma uvakashela iyiphi iwebhusayithi, kungase ukugcina noma ukubuyisa ulwazi esipheqululini sakho, ikakhulukazi ngesimo amakhukhi. Lolu lwazi kungaba ngawe, izintandokazi zakho noma idivayisi yakho futhi iningi esetshenziswa ukwenza umsebenzi indawo njengoba ulindele ukuba. Ulwazi akavamile ngqo, kodwa angakunika ngaphezulu ngezifiso kuwebhu isipiliyoni.
Ngoba sihlonipha ilungelo lakho yobumfihlo, ungakhetha ukungavumeli ezinye izinhlobo amakhukhi. Chofoza phezu ezahlukene isigaba izihloko ukuthola kabanzi futhi ushintshe izilungiselelo zethu ezizenzakalelayo. Nokho, ivimbela ezinye izinhlobo cookies anga nomthelela nakho kwakho isayithi kanye namasevisi siyakwazi ukunikela.
Wena ufundile futhi wavumelana yethu Inqubomgomo yobumfihlo.
Amakhukhi ezidingekayo ukuze isayithi usebenze kahle.
Lokhu kusisiza ukuba uyokuvuza nge ukusetshenziswa mahhala isicelo kanye ukukunika isaphulelo uma umuntu ukumemele website Iris.
PHPSESSID, umeme, ap_id
Lezi zisetshenziselwa ukulandelela kokuhlanganyela nomsebenzisi nokuthola izinkinga ezingaba khona. Lezi ukusisiza ukuthuthukisa amasevisi ethu ngokunikeza idatha kohlaziyo ukuthi abasebenzisi usebenzise leli sayithi.
HHAYI, IMVUME, 1P_JAR, LAPHA
Vala i-akhawunti yakho?
I-akhawunti yakho izovalwa futhi yonke imininingo izosuswa unomphela futhi ayikwazi ukutholwa. Uqinisekile?